‘म पार्टी सभापति भएकै कारण गत निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले नसोचेको मत ल्यायो’ - Nigranitimes
होमपेज / अन्तरवार्ता / ‘म पार्टी सभापति भएकै कारण गत निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले नसोचेको मत ल्यायो’
गणेश कुमार खड्का
नेपाली कांग्रेस मोरङ—३ नम्बर क्षेत्रीय सभापति
नेपाली कांग्रेस १४ औं महाधिवेशन तयारीमा छ । तपाई के गर्दै हुनुहुन्छ ?
यो क्षेत्रमा पहिला २१ सय थियो । केही बसाई सराइ, कोही देहान्त हुनुभयो । नयाँ तथ्याङक आइसकेको छैन । कस्ता सदस्यलाई क्रियाशील दिने भन्ने बिषयमा विधान प्रष्ट छ । साधारण सदस्य लिएर संगठनमा काम गरेको हुनुपर्ने, जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने, निर्वाचनमा सहयोग गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । क्रियाशील सदस्यहरुको सहभागिता रहेको वडा कार्यसमितिको बैठकले शिफारिस गरेर नाम पठाउनु पर्ने हुन्छ ।
म हिजो २ नम्बरको सभापति थिएँ । अहिले २, ३ र ८ नम्बर क्षेत्र मिलेर एउटा ३ नम्बर क्षेत्र बनेको छ । मैले नेतृत्व गर्दा यो क्षेत्रमा मत बढि खस्यो । क मा सुयोर्माराज राईले प्रत्यक्ष निर्वाचन विजय हुनुभयो भने प्रदेश ख का उमेदवार ललितबहादुर श्रेष्ठ थोरै मतले पारजित हुनुभयो । संघमा डा सुनिल शर्माले ४० हजार ५ सय ६ मत ल्याएर थोरै भोट ल्याएर पराजित हुनुभयो । हाम्रो क्रियाशीलताले क्षेत्रमा जनताले राम्रो मत दिनु भएको मूल्याङकन छ ।
हामीले राम्र मत ल्याउनुको साथै र संगठन सुधार गर्न सफल भयौं । त्यही भएर पार्टीका साथिहरुले एक पटक उठनु पर्छ भन्दै हुनुहुन्छ । त्यही भएर पार्टीलाई अझ सुधार गर्न मलाई पनि उठनु पर्छ भन्ने लागेको छ । पार्टी सुधारको लागि एक पटक मौका दिनुहुन्छ भन्नेमा लागेको छ ।
हेर्नुस सबैकुरा राजनीतिक रहेछ । स्थानीय सरकारमा हाम्रा जनप्रतिधि कम छन् । नेकपाको पूर्ण बहुमत छ । माथि केन्द्र, प्रदेशमा प्रतिपक्ष हुन्छ । स्थानीय तहको बेन्चमा प्रतिपक्ष हुँदैन । सदनमा बेन्च नभएपछि बाहिरबाट सहयोग गर्ने हो ।
हामीले हरेक कुराको सुझाव सल्लाह, समस्यहरु मेयर साथै कार्यपालिका सदस्यहरुलाई भेटेर, फोन र ज्ञापनपत्र मार्फत घच्घच्याइरहेका छौ । पथरीको समस्यहरु के के हुन ? सुझाव दिएका छौ । प्रतिपक्ष भनेर नगरपालिकामा ताला लागउने, तोडफोड, टायर बाल्ने, बजार बन्द गर्ने काम चाँही भएको छैन । अन्य सुझाव दिएका छौ । अन्तमा केही छ ?
नेपाली कांगेस १४ औं महाधिवेशनको संघारमा छौ । हामी पार्टीको काममा छौ । पार्टीको विधान अनुसार रहेर क्रियाशील नवीकरण, नयाँ शिफारिस लगायतको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छौ । क्रियाशील साथिहरुलाई पनि गाउँगाउँमा पार्टीलाई स्थापित गर्न जनताको काममा लाग्न र संगठनलाई गतिशिल बनाउन लाग्न आग्रह गर्दछु ।
म नगरपालिकामा मेयरको उमेद्वार ‘उपविजेता’ भएकोले नगरको भवन कहाँ रहने, अव्यवस्थित दोहोरो स्वामित्वको सुकुम्बासीको समस्य कसरी समाधान गर्ने, कर बढिरहेको जनतामा गुनासो छ । छिटोछरितो सेवा नपाएकोमा जनता खुसी छैनन् । बिकास निर्माणमा पारदर्शीता, गरिविी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य समस्या समाधान बसपार्क, शौचालय, बालउद्यम, बृद्ध आश्राम व्यवस्थित गर्न मेयर साव र कार्यपालिकालाई यो मिडिया मार्फत पनि आग्रह गर्दछु ।